MUQDISHO, Soomaaliya - Dad gaaraya illaa 5 qof, oo canug yar oo caseeye ahaa uu ku jiro ayaa ku dhimatay qarax Is-miidaamin ahaa oo galabta ka dhacay magaaladda Muqdisho, ee Caasimadda Soomaaliya.
Sarkaal booliska katirsan, oo la hadlay KON ayaa sheegay in qaraxa uu fuliyay nin naftii-halige ah oo beegsaday maqaayadda BLUE SKY oo xiligaasi ay ku jireen xubno katitsan Sirdoonka Soomaaliya.
Maqaayadda waxay ku dhegan tahay Koontaroolka bari ee laga galo xarunta Madaxtooyadda dalka, Villa Soomaaliya taasoo maalinta berri ah martigelinaysa Shir weyn ay isagu imaanayaan Farmaajo iyo Madaxda Maamullada.
Waxaa jira khasaaro dhaawac ah oo illaa 7 gaaraya, waxaana la dhigay dadkaasi Isbitaallada magaaladda qaarkood oo lagu daawaynayo. Askar iyo shacab ayay isagu jiraan kuwa dhintay.
Falalka amni darro iyo qaraxyada ayaa tan iyo bishii lasoo dhaafay kusoo badanaya magaaladda, iyadoo ay u muuqato inay Al-Shabaab ka faa'idaysanayso marxaladda kala-guurka ah, oo madaxda sare ay ku mashquuleen doorashooyinka.
0 Comments Topics: farmaajo qarax villa soomaaliya